SE Series Slewing Drive Factory - China SE Series Slewing Drive ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
ဆိုလာခြေရာခံစနစ်အတွက် XZWD SE9 Slewing drive
1. အလုံပိတ်အိမ်ရာ slewing drive သည် အဓိကအားဖြင့် ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ မိုးဒဏ်ခံခြင်းနှင့် တိုက်စားမှုဆန့်ကျင်သည့် အခါသမယအတွက် မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်အတွက် အတော်လေးမြင့်မားသောအခြေအနေတွင် အဓိကသက်ရောက်ပါသည်။တိကျမှုအဆင့် IP65
2. မတူညီသောမော်တာများ (AC၊ DC၊ Hydraulic) ကို ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရ ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။
3. Slewing ring ကို ၎င်း၏ core အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် လက်ခံခြင်းဖြင့်၊ slewing drive သည် axial force၊ radial force နှင့် tilting moment ကို တစ်ပြိုင်နက် ခံနိုင်သည်။Slewing drive ကို မော်ဂျူလာနောက်တွဲများ၊ ကရိန်းအမျိုးအစားအားလုံး၊ ဝေဟင်လုပ်ငန်းခွင်သုံး ပလပ်ဖောင်း၊ နေရောင်ခြည်သုံး ခြေရာခံစနစ်များနှင့် လေစွမ်းအင်စနစ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးချပါသည်။
4. ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များအတွက် ပုံမှန်မော်ဒယ်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
5. ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များအတွက် မတူညီသောအရောင်များကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
6. ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များအတွက် မော်ဒယ်အသစ်များကို အပြောင်းအလဲ သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
SE7 slewing drive |Wanda အထူးရောင်းရန်ရှိသည်။
အမျိုးအစား- Slewing Drive
သက်ဆိုင်သောစက်မှုလုပ်ငန်းများ ကုန်ထုတ်စက်ရုံ၊ စက်ယန္တရား ပြုပြင်ရေးဆိုင်များ
အင်္ဂါရပ်- အလုံပိတ်အိမ်ရာများ လှည့်ပတ်မောင်းနှင်ခြင်း။
အထွက် Torque အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ 1.5 kN.m
Torque ကို ကိုင်ထားပါ။ 10.4 kN.m
ခြေရာခံခြင်း တိကျမှု ≤ 0.15°
အလေးချိန် ၂၃ ကီလိုဂရမ်
ဝန်ဆောင်မှု- OEM ဝန်ဆောင်မှု။ ဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှု
မူလနေရာ- Jiangsu၊ တရုတ် (ပြည်မ)
မော်တာ- ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာ နှင့် အေစီမော်တာ နှင့် 24V DC မော်တာ